PressReader - Isolezwe: 2017-11-15 - Ummeli uphawula ngesigwebo sikaManana
Ummeli uphawula ngesigwebo sikaManana
IZIKHALO zomphakathi mayelana necala elisenkantolo azibi nawo umthelela esinqumweni kodwa kusebenza umthetho obhalwe phansi.
Lokhu kushiwo nguNksz Nolwazi Malimela ongummeli ozimele weMalimela and Associates, ephawula ngesigwebo sikaMnuz Mduduzi Manana. Yize ethe ngeke asho ukuthi sincane noma sikhulu yini isigwebo esitholwe nguManana eNkantolo yeMantshi, eRandburg eGoli ngoMsombuluko, uthe inkantolo ikwenze konke okufanele.
UManana owayeyiPhini likaNgqongqoshe weMfundo ePhakeme, ukhethiswe ukuthi ahlawuliswe uR100 000 noma adonse unyaka ejele. Uyalelwe ukuthi akhokhele abagilwa uR26 680.46, asize nomphakathi amahora angu-500.
I-EFF ithe ayihambisani nesigwebo, ibona singamfanele uManana.
“Kumele sikuphawule ukuthi uManana wazivumela ukuthi unecala, inkantolo ingazange ithole nesikhathi sokuthola ubufakazi. Ngamanye amazwi akazange ayichithele isikhathi. Lezi ngezinye zezinto ezibhekwayo uma kukhishwa isigwebo, kubhekwa nokuthi uthini umthetho ngecala elisezithebeni,” kuchaza uNksz Malimela.
Ugcizelele ukuthi inkantolo bekumele ikhiphe isigwebo ngokwecala alenzile. Ulinganise ngokuthi ibingeke imjezise ngokwecala lesibhamu ekubeni ebekwe elokushaya.
Uthe okunye okubalulekile ukuthi isigwebo kube ngesizoduduza umgilwa, sisize nobekwe icala ukuze abuye akwazi ukuba wusizo emphakathini.
“Ijele lihlala liba yisinqumo sokugcina ngoba okubalulekile ukuthi umuntu athole isigwebo esizomjezisa. Inkantolo imyalele nokuthi ahambele izithangami zokulawula intukuthelo ngoba ekugcineni naye kumele asizakale,” kusho ummeli.
Mayelana nenhlawulo, uthe inkantolo ibuka umuntu ukuthi yimalini angayikhokha. Leyo mali ingena esikhwameni soMbuso njengeyebheyili. Ucacise nangokuba nelinye icala phambilini njengoba uManana ake wabekwa elokweba isiphuzo. UNksz Malimela uthe isigwebo simataniswa necala elidala kuphela uma lingaphansi kweminyaka elishumi lenzeka noma lihlobene nelisha.
NgoSepthemba uManana walahlwa amacala amathathu okushaya ngenhloso yokulimaza abesifazane emuva kwesigameko esenzeka ngoAgasti 16 endaweni yobumnandi eGoli. Lesi sigameko sasatshalaliswa ngevideo ezinkundleni zokuxhumana, wahoxa nasesikhundleni. Emuva kwesigwebo uManana ufake ezinkundleni zokuxhumana i-video exolisa emndenini, emphakathini nakwi-ANC.